Dikan'ny nofy - rakibolana ofisialy & dikanteny ofisialy
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny bibilava?
Inona no dikan'ny hoe manonofy zaza?
Inona no dikan'ny hoe manonofinofy na kotroka?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny devoly na ny demonia?
Inona no dikan'ny hoe manonofy mpamosavy sy mpamosavy?
Inona no dikan'ny hoe manonofy hitomany?
Inona no dikan'ny hoe manonofy fa voatsatoka antsy ianao?
Ny dikan'ny hoe manonofy momba ny nify na latsaka ny nifinao
Inona no dikan'ny hoe manonofy fa voatifitra na voatifitra ianao?
Inona no dikan'ny hoe manonofy fa niverina niaraka tamin'ny vadinao taloha ianao?
Inona no dikan'ny hoe manonofy rano?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny rano mangarahara?
Inona no dikan'ny hoe manonofy rano maloto?
Ny dikan'ny nofinofy momba ny rano madio
Inona no dikan'ny hoe manonofy momba ny hala?
Inona no dikan'ny hoe manonofy tantely?
Inona no dikan'ny hoe manonofy maingoka na maingoka?
Miaraka amin'i B
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny trozona?
Inona no dikan'ny hoe manonofy bisikileta?
Inona no dikan'ny hoe manonofy fako?
Inona no dikan'ny hoe manonofy handro?
Miaraka amin'i C
Inona no dikan'ny hoe manonofy kalalao?
Inona no dikan'ny hoe manonofy ny coronavirus?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny voay?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny fasana?
Inona no dikan'ny hoe manonofy sôkôla?
Miaraka amin'i D
inona no dikan'ny hoe nofy amin'ny nify?
Inona no dikan'ny hoe manonofy fa mihintsana ny nifinao?
Inona no dikan'ny hoe manonofy feso?
Inona no dikan'ny hoe manonofinofy ny mitanjaka?
Inona no dikan'ny hoe manonofy vola?
Inona no dikan'ny hoe manonofy tohatra?
Miaraka amin'i F
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny fety?
Inona no dikan'ny hoe manonofy matoatoa?
Miaraka amin'i G
Inona no dikan'ny hoe manonofy ady?
Inona no dikan'ny hoe manonofy goavambe?
Inona no dikan'ny hoe manonofy saka?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny kongona?
Inona no dikan'ny hoe manonofy akoho?
Inona no dikan'ny hoe manonofy kankana?
Miaraka amin'i H
Inona no dikan'ny hoe manonofy hopitaly?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny vitsika?
Inona no dikan'ny hoe manonofinofy hanao adala?
Inona no dikan'ny hoe manonofy atody?
Miaraka amin'i I
Miaraka amin'i L
Miaraka amin'i M
Miaraka amin'i N
Miaraka amin'i O
Miaraka amin'i P
Miaraka amin'i R
Miaraka amin'i S
Miaraka amin'i T
Miaraka amin'i V
Fianakaviana sy namana
Vehivavy sy ankizy
Dikan'ny nofinofy - dikanteny sy rakibolana ofisialy
Liana te hahafantatra ny fandikana ary ny hevitry ny nofinao? Efa nijanona ve ianao nieritreritra ilay nofy ratsy izay miverimberina foana ary tsy mamela anao hiala sasatra? Inona no ezaky ny tsy fahatsiarovan-tena hampita aminao rehefa matory ianao ary ahoana no ahafahantsika manao fandikana marina ny eritreritsika amin'ny alina?
Mety tsy fantatrao izany, fa amin'ny alina dia miasa ihany ny atidohantsika ary afaka manonofy isika na dia mandreraka be aza ny andro. Ankoatr'izay, ny nofy tsirairay ananantsika dia samy hafa tanteraka, araho ny dikan'ny nofy ary ny fianarana mandika ny teti-pitsiny sarotra dia hanampy anao hahafantatra bebe kokoa ny tenanao.
Ny fandalinana ny dikany sy fandikana nofy zavatra nampientanentana sy nanitikitika ny olombelona hatramin'ny maraina ny andro. Na dia tamin'ny andro taloha aza ny famaritana ireo sary nofy dia nitady izay hahitana hafatra avy amin'Andriamanitra, nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy ny fivoaran'ny aretin-tsaina, ny fandikana ny nofy dia ampiasaina hanehoana ny atiny voatahiry tsy nisy fahatsiarovan-tsaina tao an-tsain'ny olombelona na ireo ahiahy tamin'izany andro izany. mampahory antsika amin'ny hafa.
Misaotra an'i mpitsabo aretin-tsaina malaza toy ny malaza Sigmund Freud, ny frantsay Jean Laplanche sy Jean-Bertrand Pontalis na Suisse Carl Gustav Jung Ny fandikana ny nofy dia nitsahatra tsy hita ho zavatra tsy matotra ary lasa teknika fitsaboana. Raha liana amin'ilay lohahevitra ianao, Eto ianao dia manana rohy mankany amin'ny bibliography momba ahy sy ireo mpanoratra tiako indrindra.
1 Jereo ny dikan'ny nofy maimaim-poana ao amin'ny rakibolana manokana
2 Diksionera nofinofy ofisialy: tsy ho mistery aminao intsony ny fandikana
3 Manaova fandikana nofy ary fantaro ny dikan'izany
4 Fandikana vs dikan'ny nofy
5 Ny fandikana ny nofy taloha
6 Inona no manofy?
7 Psychoanalysis sy ny fandikana ny Freud
8 Ny psikolojia fandalinana nataon'i Carl Jung
9 Diksionera handikana ny dikan'ny nofy
10 Iza aho?
11 Inona avy ireo dingana amin'ny torimaso
11.1 Dingana I: dingana tsy fahamatorana
11.2 Dingana II: dingana torimaso maivana
11.3 Dingana III: dingana tetezamita
11.4 Dingana IV: dingana fatoriana lalina
11.5 Dingana fatoriana Rem
12 Ny nofy mahazatra indrindra
13 Torohevitra hitadidy tsara ny nofy
14 Dikan'ny nofy
Jereo ny dikan'ny nofy maimaim-poana ao amin'ny rakibolana manokana
Amin'ireto andalana manaraka ireto dia afaka mahita lisitry ny nanafatra ny hevitry ny nofy avy any AZ, hanamora ny fampiasanao tranonkala. Ireo nofinofy rehetra ireo dia mifangaro eo amin'ny fanangonana ny nofinofy manan-danja indrindra tsaboin'ny mpanoratra malaza sy ny sasany amin'ireo anjara birikiko manokana mifototra amin'ny zavatra niainako tamin'ny nofy niaretako ary nandinika sy nandinika tamin'ny an-tsipiriany aho nandritra ny taona maro.
Lisitra tena feno izy io nefa mitohy amin'ny fivoarana mitohy, Raha manana nofy mampiahiahy anao ianao ary miverina ny azy ary tsy hita izany amin'ny lisitra mangataka aminao aho manorata hafatra amiko amin'ny alàlan'ny sehatry ny fifandraisana amin'ny tranonkala ary hofotopotoriko ny raharahanao ary ampidiriko ao anaty lisitra io nofy io hahafantaran'ny mpampiasa hafa momba izany.
Tonga ny fotoana hitadiavana ilay nofy mampiahiahy anao. Eto ianao manana ny lisitra voalamina araka ny abidia.
Nofy izay manomboka amin'ny A
Inona no dikan'ny hoe manonofy vatam-paty?
Inona no dikan'ny hoe manonofy fiara, fiara na fiara?
Inona no dikan'ny hoe manonofy famonoana olona na famonoana olona?
Inona no dikan'ny hoe manonofy namana?
Inona no dikan'ny hoe manonofy anjely?
Inona no dikan'ny hoe manonofy fanjaitra?
Inona no dikan'ny hoe manonofy fiaramanidina?
Nofy izay atomboka amin'ny B
Inona no dikan'ny hoe manonofy slugs?
Inona no dikan'ny hoe manonofy vorondolo sy vorondolo?
Inona no dikan'ny hoe manonofy basy?
Inona no dikan'ny hoe manonofy bibikely sy bibikely?
Inona no dikan'ny hoe manonofy dihy?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny fampakaram-bady?
Nofinofy izay atomboka amin'ny C
Inona no dikan'ny hoe manonofy bibilava?
Inona no dikan'ny hoe manonofy antsy?
Inona no dikan'ny hoe manonofy ho latsaka any amin'ny banga?
Inona no dikan'ny hoe manonofy foza?
Inona no dikan'ny hoe manonofy ny goaika?
Manonofy momba ny volo
Nofy izay manomboka amin'ny D
Inona no dikan'ny hoe manonofy hiady na hifamaly?
Inona no dikan'ny hoe manonofy mitady vola?
Nofinofy izay manomboka amin'ny E
Inona no dikan'ny hoe manonofy ny sipanao taloha na ny sakaizanao taloha?
Inona no dikan'ny hoe manonofy elefanta?
Inona no dikan'ny hoe manonofy momba ny fitondrana vohoka?
Nofinofy izay atomboka amin'ny F
Inona no dikan'ny hoe manonofy Facebook?
Inona no dikan'ny hoe manonofy afo?
Inona no dikan'ny hoe manonofy voninkazo?
Inona no dikan'ny hoe manonofy ny voankazo?
Inona no dikan'ny hoe manonofy havana maty
Nofinofy izay atomboka amin'ny G
Nofy izay manomboka amin'ny H
Nofinofy izay atomboka amin'ny I
Inona no dikan'ny hoe manonofy tondra-drano?
Inona no dikan'ny hoe manonofy any am-piangonana?
Inona no dikan'ny hoe manonofinofy tsy fahatokiana na voafitaka?
Nofy izay manomboka amin'ny L
Inona no dikan'ny hoe manonofy momba ny kankana?
Inona no dikan'ny hoe manonofy liona?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amboadia?
Inona no dikan'ny hoe manonofy androngo?
Inona no dikan'ny hoe manonofy orana?
Inona no dikan'ny hoe manonofy labyrint?
Inona no dikan'ny hoe manonofy lakile?
Nofinofy izay atomboka amin'ny M
Inona no dikan'ny manonofy fa novonoina ianao?
Inona no dikan'ny hoe manonofy hamono?
Inona no dikan'ny hoe manonofy gidro?
Inona no dikan'ny hoe manonofy valizy?
Inona no dikan'ny hoe manonofy lalitra?
Inona no dikan'ny hoe manonofy ho faty?
Inona no dikan'ny hoe manonofy olona maty?
Inona no dikan'ny hoe manonofy vola sy vola?
Nofinofy izay manomboka amin'ny N
Inona no dikan'ny hoe manonofy isa?
Inona no dikan'ny hoe manonofinofy lomano?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny lanezy?
Nofinofy izay manomboka amin'ny O
Inona no dikan'ny hoe manonofy volamena?
Inona no dikan'ny hoe manonofy momba ny onja goavambe?
Inona no dikan'ny hoe manonofy an'i ouija?
Nofinofy izay atomboka amin'ny P
Inona no dikan'ny hoe manonofy pandemika?
Inona no dikan'ny hoe manonofy momba ny moka?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny dobo filomanosana?
Inona no dikan'ny hoe manonofy alika?
Inona no dikan'ny hoe manonofy trondro na trondro?
Manonofy enjehina na enjehina
Inona no dikan'ny hoe manonofy polisy?
Inona no dikan'ny hoe manonofy voromailala?
Inona no dikan'ny hoe manonofy mofo?
Inona no dikan'ny hoe manonofy fa manaikitra anao ny alika?
Nofinofy izay manomboka amin'ny R
Inona no dikan'ny hoe manonofy totozy?
Inona no dikan'ny hoe manonofy momba ny akanjo?
Inona no dikan'ny hoe manonofy saobakaka sy sahona?
Inona no dikan'ny hoe manonofy famantaranandro?
Inona no dikan'ny hoe manonofy voalavo?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny ony?
Nofinofy izay manomboka amin'ny S
Inona no dikan'ny hoe manonofy ra?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny fakana ankeriny?
Inona no dikan'ny hoe manonofy zombie?
Nofinofy izay atomboka amin'ny T
Inona no dikan'ny hoe manonofy antsantsa?
Inona no dikan'ny hoe manonofy omby?
Inona no dikan'ny hoe manonofy tsunami?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny horohoron-tany na horohoro?
Inona no dikan'ny hoe manonofy tigra?
Inona no dikan'ny hoe manonofy ny tarantulas?
Inona no dikan'ny hoe manonofy fano?
Inona no dikan'ny hoe manonofy tany?
Inona no dikan'ny hoe manonofinofy tadio sy tadio?
Nofinofy izay manomboka amin'ny V
Inona no dikan'ny hoe manonofy momba ny dia na ny fitsangatsanganana?
Inona no dikan'ny hoe manonofy momba ny omby?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny volokano?
Inona no dikan'ny hoe manonofy manidina na manidina?
Inona no dikan'ny hoe manonofy akanjo fampakaram-bady?
Inona no dikan'ny hoe manonofy mandoa?
Inona no dikan'ny hoe manonofy amin'ny vampira?
Raha vantany vao matory isika dia mandeha amin'ny dia mahafinaritra izay mampiseho ny hetahetantsika sy ny tahotra. Ny ora fitsaharana dia nanjary fitetezam-paritra ho an'ny olan'ny andavan'andro, ho an'ireo ahiahy manitsaka ny saintsika, ka noho izany dia ilaina ny mahatakatra ny fandikana nofy hanazava ny dikany.
Diksionera nofinofy ofisialy: tsy ho mistery aminao intsony ny fandikana
Tamin'ny andro taloha, ny kolontsaina dia nanandrana namantatra ny fomba fandikana ny nofy tsirairay, ny sasany avy amin'ny fomba mistika sy esoterika, fa ny sasany kosa manaraka ny fomba siantifika. Izany hoe, toy ny any amin'ny sivilizasiona hafa rehetra, dia nisy mpanao hatsikana sy psikolojika malaza be.
Izay rehetra mitranga ao an-tsaintsika ambany rehefa manonofy isika dia afaka mamaha ny fisalasalana maro izay tsy azontsika faritana mandritra ny fotoana mifoha. Angamba izany no antony nandanian'ny olombelona an-jato taona maro ny heviny fantaro ny zava-drehetra momba ny saina ary ny toetran'ny tena.
Manaova fandikana nofy ary fantaro ny dikan'izany
Tena manana nofinofy mialoha ve isika? Nahoana izy ireo no maneho ny hetahetantsika sy ny tahotra ananantsika? Fa maninona no mamorona eritreritra tsy hay faritana ny tsy fahatsiarovan-tena? Indraindray isika afaka gaga amin'ny fahasarotan'ny nofy. Manofinofy izahay fa very asa, maty olona iray ao amin'ny fianakaviana na misaraka amin'ny vadinay. Izany hoe izy ireo nofy mifandraika amin'ny tontolo iainantsika, ary indraindray toa tena marina tokoa izy ireo ka mitady dikany amin'ilay hafatra nofinofy izay andefasan'ny tsy fahatsiarovan-tena ho antsika isika. Raha te hahita ianao ny fomba fanaovana fandikana marina ny nofinao tsindrio eto.
Fandikana vs dikan'ny nofy
Ny fahalalana ny dikan'ny nofy dia tsy mitovy amin'ny fandikana azy. Raha te hahafantatra ny fomba handikana tsara ny nofy dia tsy mila mahafantatra tsara ny dikany fotsiny ianao, fa ilaina koa ny mahafantatra antsipiriany hafa manan-danja sy ny sahan-kevitra Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=XNUMX '' ny toe-bolanao. Ohatra, tsy mitovy izany nofinofy volamena raha manankarena ianao noho ny mahantra. Amin'ny farany dia mitovy ihany ny nofy, fa ny dikany dia tena samy hafa be.
Ny fandikana ny nofy taloha
Efa liana tamin'ity lohahevitra ity ny Grika. Saingy tamin'izany fotoana izany, ny rafitry ny fiezahany handika ny nofy dia voafehin'ny lovantsofina am-bava. Izany hoe, ireo hevitra rehetra ireo izay nampitaina tamin'ny taranaka nifandimby ary tamin'ny ankamaroany dia ny sitrapon'ireo andriamanitra inona no hita tao amin'ireo nofy ireo.
Saingy amin'ny lafiny iray hafa an'io finoana io dia misy mpanoratra toa ny filozofa Plato na Aristote Nanoratra ny heviny momba izany koa izy ireo tamin'ny boky toy ny The Republic of the first and About Dreams of the second. Tsy nanadino izany, fotoana vitsy taty aoriana, Pythagoras dia niresaka an'ity olana ity ihany koa ho fitaovana fifandraisana amin'ireo zavaboary mihoatra ny natiora. Raha toa ka miloka amin'ny fitsinjaram-pahefana ny Stoika. Taty aoriana dia hisy hevitra vaovao momba an'i Cicero na Artemidoro.
Inona no manofy?
Ny fanandramana mamantatra izay mitranga manodidina antsika, ary amin'ny alàlan'ny nofy, dia antsoina hoe manonofy. Saingy nofinofy fotsiny, satria rehefa nisy nofy ratsy tafiditra, dia voalaza fa ny devoly no nandefa azy ireo ary tsy mendrika ny hamakafaka. Marina fa na eo aza ny teoria rehetra misy, ity teknikan'ny sikidy, dia miorina amin'ny fandinihana an'i Sigmund Freud.
Psychoanalysis sy ny fandikana ny Freud
Ny sasany amin'ireo hevitra na fandalinana hiaraka amin'i Freud dia efa nanana ny fototry ny voalaza teo. Izany hoe, tsy ho vaovao izy ireo, satria teo amin'izy ireo ny fomban-drazana. Saingy, na dia sarotra aza ny mamakafaka, dia tsy maintsy lazaina fa tonga i Freud mba hametraka hevitra ary hanaraka. Te hampiseho an'izany aho tandindona hita taratra tao amin'ny nofyNifandray tamin'ny saintsika sy ny tsy nahatsiaro tena izy ireo.
Noho io antony io, rehefa mamakafaka nofy iray dia tsy maintsy raisintsika avokoa ny hevitra sy ny hevitra hitantsika ao fa tsy hijanona amin'ny iray fotsiny. Tsy azo ampiana teknika na fandikana finoanoam-poana amin'ny karazana tolo-kevitra. Ny rohy sy ny fifandraisana amin'ny fiainantsika andavanandro dia ho manan-danja ihany koa. Amin'ireo nofy rehetra dia nomen'i Freud ny anarana hoe 'nofy mahazatra' ho an'ireo izay tena betsaka amintsika. Ohatra ireo mifandraika amin'ny fahafatesana na fianjerana. Satria izy rehetra afaka mitondra fifandonana anatiny. Raha fintinina dia nambarany fa ny nofy dia làlana mankamin'ny atiny sy any amin'ny filantsika miafina indrindra.
Ny psikolojia fandalinana nataon'i Carl Jung
Raha nandalina ny Freud isika dia marina fa tsy hanadino an'i Jung koa isika. Somary very hevitra ihany koa izy tamin'ny hevitr'ilay voalohany, saingy nanao dingana lavidavitra kokoa ilay mpitsabo aretin-tsaina soisa. Amin'ny ankapobeny, ny nofy ho azy dia vokatry ny natiora. Nahita isan'andro ny olan'ny delestazy izy ary koa ny fananahana tao amin'ireo marariny ary ireo nofinofy miampy ireo dia nofinofy mahazatra an'ny sasany tantara angano.
Ka teo no nahatsapany fa tsy misy fifandraisana mivantana foana amin'ny zavatra niainan'ilay olona na tsapany. Izany no antony niantsoany azy ho tsy mahatsiaro tena. Izany rehetra izany dia ho karazana marika amin'ny fitondrantena izay nolovain'ny olombelona ary azo faritana ho archetypes na voajanahary voajanahary. Ka raha fintinina, ny tian'i Jung hampitaina dia izany ny nofy dia misy dikany amin'ny zavatra niainantsika ary izy ireo dia ho tetezana ilain'ny filan'ny fanahy.
Diksionera handikana ny dikan'ny nofy
Na dia ampahany tsara amin'ny nofy aza dia fehezin'ny lohahevitra, misy singa maro manana dikany voafaritra tsara. Ny fanadihadiana lalina momba ireo singa ireo dia nanangona ny angona rehetra ao a rakibolana nofinofy, boky ahafahan'ny tsirairay mandika ny azy.
Raha mahaliana anao fantaro ny dikan'ny nofy, fantaro izay soloin'izy ireo sy ny sarin'izy ireo, miaraka amin'ny rakibolinay nofinofy azonao atao ny mamoaka ny vaovao rehetra maimaim-poana. Ho fantatrao bebe kokoa ny tenanao amin'ny alàlan'ny hafatra ateraky ny fahatsiarovan-tenanao ary ho fantatrao ny fomba handikana ny tena ahiahinao. Amin'ny meanings-suenos.com ianao dia ho afaka hahatratra ambaratonga lalina amin'ny famotopotorana manokana sy ny fanatsarana ara-panahy amin'ny fikarohana ny dikan'izany.
Nacho Zarzosa no anarako ary izaho no olona ao ambadik'ity tranonkala ity. Manana mari-pahaizana momba ny psikolojia avy amin'ny Faculty of Psychology ao amin'ny Oniversiten'i Oviedo ary fatra-pitia ny hevitry ny nofy sy ny psychoanalysis. Afaka mahita ny mombamomba ahy rehetra ianao tsindrio eto.
Inona avy ireo dingana amin'ny torimaso
Ny fahalalana ny dingana tsirairay amin'ny torimaso dia afaka manampy betsaka antsika hanana torimaso mahafinaritra kokoa ary miala sasatra tsara kokoa. Ity dia zavatra iray izay mitaona betsaka ihany koa amin'ny nofinofisintsika, ka ny fahalalana tsara ny dingana dia zava-dehibe.
Dingana I: dingana tsy fahamatorana
Io no dingana voalohany ary misy ny 10 torimaso voalohany, manomboka amin'ny fotoana ifohazantsika mandra-pahatonga antsika ho rendremana kely.
Dingana II: dingana torimaso maivana
Ny dingana faharoa amin'ny torimaso dia misy a faharetan'ny antsasaky ny fotoana fatoriana manontolo ary io no dingana ahafahan'ny vatanao miala tsikelikely amin'ny tontolo iainana miaraka amin'izay fitepon'ny fo sy ny fifohana rivotra miadana lasa milamina sy milamina kokoa izy io. Amin'ity dingana ity dia sarotra be amintsika ny mifoha, fa na eo aza izany dia ao amin'ny atidohantsika ny fiasan'ny ati-doha lehibe mifandimby amin'ireo kely kely kokoa. Matetika rehefa mifoha amin'ity dingana ity isika dia mazàna amin'ny fomba manaitra azy, ohatra, rehefa manonofinofy fa mandeha na mianjera amin'ny hantsana isika.
Dingana III: dingana tetezamita
Ny dingana fahatelo no fohy indrindra amin'ny rehetra, maharitra 2 na 3 minitra ny fitambarany ary a fifindrana eo amin'ny torimaso maivana sy ny dingana fatoriana lalina.
Dingana IV: dingana fatoriana lalina
Ny dingan'ny torimaso lalina dia maharitra 20% amin'ny torimaso tanteraka ary manan-danja indrindra amin'ny rehetra satria mamaritra ny kalitaon'ny fitsaharana sy ny fahafahan'ny vatana sitrana amin'ny havizanan'ny andro. Tena ambany ny tahan'ny taovam-pisefoana ary milatsaka be ny tsindry fo, noho izany dia sarotra be ho antsika ihany koa ny mifoha voajanahary amin'ity dingana ity.
Dingana fatoriana Rem
Ny dingan'ny torimaso REM dia mitana ny 25% amin'ny torimasontsika. Ny anarana REM dia avy amin'ny Rapid Eye Movement amin'ny teny anglisy ary midika izany fa mihetsika tsy tapaka eo ambanin'ny hodi-maso ny maso. Ny fiasan'ny ati-doha mandritra ity dingana ity dia avo dia avo, saika mitovy ambaratonga amin'ny rehefa mifoha isika, nefa miaraka amin'izay dia voasakana ny hozatsika mba tsy hihetsika amin'ny vaovao rehetra zarain'ny ati-doha. Mandritra io dingana io mitranga ny torimaso ka io no dingana lehibe indrindra tokony hijerena ity tranonkala ity.
Ny nofy mahazatra indrindra
Tsy ny nofy rehetra dia mitovy iraisana, misy nofy izay iaretan'ny maro, ohatra manonofy momba ny sakaizanao taloha na dia manonofy hiverina any amin'ny sakaizanao indray, manonofy momba ny rano, manonofy momba ny diky, nofinofy manidina, manonofy momba ny poa-basy o nofinofy latsaka anaty banga. Raha ny hafa kosa mahalana kokoa toa ny manonofy momba ny polisy. Manaova nofinofy mahazatra kokoa na olon-kafa hafahafa tsy azo adika ho tsara na ratsy. Toy izany koa, ny nofinofy hafahafa amin'ny olona iray dia mety ho ara-dalàna kokoa amin'ny olon-kafa. Toy ny, ohatra, ny manonofinofy momba ny polisy dia mahazatra kokoa raha misy ifandraisany amin'ny polisy ny asanao, toy ny hoe miasa any amin'ny banky na any amin'ny hopitaly ianao.
Torohevitra hitadidy tsara ny nofy
Te-hahatadidy tsara ny tsipiriany momba ny nofy ve ianao mba hahitanao ny dikany avy eo? 'Manoro hevitra anao aho mba hametraka a taratasy sy penina hanoratanao ny zava-drehetra izay tadidinao tamin'ny nofinao raha vao mifoha ianao. Aza adino fa misy dikany ny antsipiriany rehetra, satria mety hidika be izany rehefa mandika azy tsara. Aorian'izay, rehefa vitanao ny andronao dia ampidiro ny rakibolantsika ary diniho ny tandindon'ny singa tsirairay hahalalanao azy bebe kokoa.
Amin'izany fomba izany dia tsy ny nofy sy ny dikany, fa afaka mianatra ianao Inona no dikan'ny hoe manonofy momba ny moka na ny midika hoe manonofy momba ny kalalao, ary koa ny fandikana sy hevitry ny nofy momba ny vola ary tadiavo ireo tsiambaratelo voatahiry ao am-pon'ny sainao. Manomboka izao dia tsy manana fialantsiny intsony ianao hamakafaka ny dikan'ny nofy ary hahafantatra bebe kokoa ny tenanao isan-kariva.
Ahoana ny fandikana ny nofy
© 2022 | meanings-suenos.com: rakibolana ofisialin'ny nofy & fandikana | Nosoratan'i Nacho Zarzosa